गाउँले जीवन कति असुरक्षित छ भन्ने तैंले बुझ्न सक्छस्, सरकार ? : विनोद दाहाल – JanaSanchar.com
गाउँले जीवन कति असुरक्षित छ भन्ने तैंले बुझ्न सक्छस्, सरकार ? : विनोद दाहाल
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ जेष्ठ २५, शुक्रबार) १८:०८
हेलो, सरकार ! सरकार, गाउँको व्यथा बुझ्छस् ? निमुखा जनताको सुरक्षा, सम्मान र ईज्जतको लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउन सक्छस् ?
३—४ दिन अघि सुनकोसी डप्खाघाटका संग्रामसिं माझीलाई २ जना धामीले असार २ गते मर्छस् भनेपछि उनी साह्रै पिरोलिएका छन् । नातीले मै किरिया गरौं कि तिमीहरु आउँछौं भनेर उस्का बाबु र आमालाई खबर गरेपछि संग्रामसिंका छोरा बुहारी घरमा आएका छन् । ती २ धामी लाप्काका बच्चे भन्ने चित्रवहादुर श्रेष्ठ र लालवहादुर श्रेष्ठ हुन् । गाउँमा फैलिएको हल्लाले आजभोली चर्चा पाएको छ । गणतन्त्र आएको देशमा, समाजवाद निर्माण गर्ने भनिएको देशमा गाउँलेको जीवन कति असुरक्षित छ भन्ने तैंले बुझ्न सक्छस्, सरकार ?
तिनै २ धामीले केही वर्ष पहिला, गुरु पुजाको दिन भोग दिएर धामी बक्ने चलन नै बसालेको स्थानबाट स्थानीय एकजना सोझी निमुखा निर्दोष महिलाललाई बोक्सी भनि आरोप लागाए । त्यो लगाएको लान्छनाले उनी यति पीडित भईन कि धेरैदिन रोईन्, अपमानको पीडाले अझै पनि उनीलाई सताईरहेको छ । ती दुई धामीहरुबाट यो बस्ती धेरै आक्रान्त छ । गाउँमा कैयौं घटनाहरु घटिरहेका छन् । उनीहरुको गुरु धामी पनि यही गाउँमा छन् । उनीले अहिले एकजना छिमेकीलाई “६ महिना काट्नै दिन्न, मन्त्र र टुनामुनाले मारिदिन्छु” भनेको कुराले गाउँघरमा के कसो हुने हो भनेर चर्चा चुलिएको छ ।
गाउँघरतिरका यी र यस्ता विषयहरु प्रथा हुन् कि कुप्रथा हुन् ? जनता यो कुप्रथाबाट कति पिडित छन् ? धर्म निरपेक्ष भनिएको देशमा यो प्रथासित सरकारको सरोकार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? धामी झाँक्रि, झारफुक जस्ता कथित मन्त्रको बलबाट हुने घटनाका नाममा भैरहेका कामकारवाहीले जनता कति असुरक्षित, शोषित, अपमानित, तिरस्कृत, पिछडा छन् भनेर बुझ्ने क्षमता सरकारसँग छ ? अहिलेसम्मका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नियम—कानुनले शोषित उत्पीडित जनताको लागि काम गर्न सकेका छन् ? गाउँघरका जनता जान्न चाहन्छन् ।
ए सरकार, गाउँमा धामी—झाँक्रि, पुरोहित—पण्डित, जस्ता मानिसहरु रहुञ्जेल गाँउँमा जनतालाई सुरक्षित राख्नै सक्दैनौ । यो निश्चित कुरा हो । गाँउँका प्रत्येक घरबाट वर्षमा यी मानिसहरुले गाउँलेबाट ५० औं हजार लगिरहेका हुन्छन्, दिन चाहिं केही दिएका हुँदैनन् । समाजमा लाने मात्रै तर नदिने त्यस्ता तत्वहरुलाई राखिराखेर समाजवाद आउँछ ? यो जनताको कुरा हो । के कडा कानुन बनाएर यस्ता कुप्रथाहरु रोक्न सक्छौ ? नत्र त सरकारमा बस्ने तिमीहरु पनि सरकारको साँचो अर्को लुटेरालाई बुझाएर बिदा लिने यसअघिका सरकार भन्दा बढी हुने छैनौ नि !!
(२०७५ जेष्ठ २५, शुक्रबार) १८:०८ मा प्रकाशित